ဘလော့ - Micvd.com
Beginner ၏လမ်းညွှန်: Capping Machine တစ်ခုဝယ်ခြင်း
ယခုကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်သည့်စက်ကိုလိုက်ရှာသောအခါမေးရန်မေးခွန်းအနည်းငယ်ကိုဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် capping စက်ကိုထည့်ရန်အချိန်ရောက်လာသောအခါမည်သည့်အရာကိုကြည့်ရမည်ကိုစဉ်းစားရန်ဒုတိယအနေဖြင့်သုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။ စဉ်တွင် ...
Machine Interface ကိုဖြည့်ပါ
အော်ပရေတာအင်တာဖေ့စ်နှင့်အလိုအလျှောက်ဖြည့်စက်များထိထိရောက်ရောက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်ခွင့်ပြုသည့်မျက်နှာပြင်မျိုးစုံမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးကို ဆက်၍ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Adjust Fill Times ဖန်သားပြင်ကိုကြည့်မည်။ နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဒီဖန်သားပြင်ရိုးရှင်းပါတယ် ...
ဗိုင်းလိပ်တံ Capping စက် - စံအင်္ဂါရပ်များ
ကွဲပြားသော capping စက်များသည်အသွင်အပြင်ချင်းမတူသော်လည်းပုလင်းတစ်လုံးချင်းစီကို Standard Standard Features များဖြင့်ထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်တသမတ်တည်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော capping အပြင်မြန်လွယ်ကူသော set-up နှင့် changeover ကိုခွင့်ပြုသည်။ အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
စတုတ္ထသုံးလပတ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - စက်များတင်ခြင်း
2018 စတင်လေပြင်းစတင် NPACK Indiana စက်ရုံ La Porte တွင်ပြုလုပ်သောထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖန်တီးထားသောထုပ်ပိုးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုတင်ပြလိမ့်မည် NPACK ...
အလိုအလျောက်ဗိုင်းလိပ်တံ Capper စစ်ဆင်ရေး
အလိုအလျောက်ဗိုင်းလိပ်တံ cappers သည် ၀ ိုင်၊ အဆက်မပြတ်ချည်မျှင်အမျိုးအစားများဖြင့်ပုလင်းများကိုတံဆိပ်ခတ်ရန်လူကြိုက်များသောစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပိတ်ပစ်ခြင်းတွင်ပုလင်းရေနှင့်အခြားအဖျော်ယမကာများ၌တွေ့ရသောပြားချပ်ချပ်များ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်အေးစက်ပုလင်းများတွင်တွေ့ရသည့်ထိပ်များ၊ စုပ်စက်မှုတ်စက်များပါဝင်နိုင်သည်
Filling Machine Interface: Filler Set Up Screen များ
Filler Set Up မျက်နှာပြင်ကိုအလိုအလျောက်အလိုလျောက်စက်၏အော်ပရေတာ၏ပင်မမီနူးမှတစ်ဆင့်ထပ်မံတွေ့နိုင်သည်။ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အသုံးပြုသူကိုဒီအတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ် ...
Marring နှင့် Cap Damage ကို Deter မှမှန်ကန်သော Spindle Disk ကိုအသုံးပြုခြင်း
ကထုတ်လုပ်သည့်ဗိုင်းလိပ်တံ capping စက်များပေါ်တွင်အသုံးပြုတဲ့ disk တွေအတွက်ခြားနားချက် NPACK ကျနော်တို့ယခင်ကအပေါ်ထိမိကြပြီအခြားဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဘာသာရပ်သည်ထုပ်ပိုးသူအသစ်များအားပညာပေးရန်နှင့်လန်းဆန်းစေရန်နှစ်စဉ်နှစ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်အမြဲတမ်းအမိန့်ပေးသည်။
သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်သင်သည်အလိုအလျောက်တံဆိပ်ကပ်စက်ကိုလိုအပ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များ၊ အမည်၊ အရေအတွက်၊ အရည်အသွေးနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်တံဆိပ်များပေါ်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်တံဆိပ်များအရည်အသွေးကိုလိုက်နာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် - မရှိဘဲ ...
အခြားစက်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ inline အရည်ဖြည့်သည့်ပစ္စည်းသည် ၀ တ်စားဆင်ယင်နိုင်မှုနှင့်ပျက်စီးနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်၏စက်ကိရိယာကိုကောင်းသောပုံသဏ္inာန်ရှိစေလိုလျှင်၊ အချို့သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွင်းမှုများရှိပါသည်။
Browsing NPACK စက်ပစ္စည်းများဖြည့်ရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အသစ်များကိုထုပ်ပိုးသည့်စက်ရုံသို့သူတို့၏ ဦး ခေါင်းကိုခြစ်ရာချန်ထားနိုင်သည်။ လျတ် ဆွဲငင်အား? ပစ္စတင်သို့မဟုတ်စုပ်စက်? ငါ့စီမံကိန်းအတွက်ဘယ်တစ်ခုကအကောင်းဆုံးလဲ။ အဖြေသည်မတူညီသောနံပါတ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ရည်ဖြည့်စက်တွင် capping နှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစွမ်းရည်နှစ်ခုလုံးရှိသည်။ ၎င်းသည်ရည်ထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ပိုးရန်လိုအပ်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာအတွက်ပြည့်စုံသောဆေးဝါးထုပ်ပိုးမှုဖြေရှင်းနည်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဤစက်၏အသုံးပြုမှု၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများကိုဆွေးနွေးပါမည်။
အရက်သေစာသောက်သောဝိညာဉ်များနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များအတွက် Corker Bar
ထုတ်လုပ်သောကွဲပြားခြားနားသော capping နှင့်တံဆိပ်ခတ်စက်တွေထဲမှာ NPACK ဘားထိပ်တန်း corkers ဖြစ်ကြသည်။ capping စက်တိုင်းလိုပဲ top top corker သည်တိကျစွာပိတ်ထားသောအမျိုးအစားကိုကိုင်တွယ်ရန်တည်ဆောက်ထားသည်။
အထုပ်တစ်ခုလုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောအလိုအလျောက် capping စက်များသည်စက်ဝိုင်းတစ်ခုစီအတွင်းအော်ပရေတာအကူအညီမလိုဘဲပုလင်းများကိုအမြဲတမ်းတံဆိပ်ခတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုအလုပ်လုပ်သော capping စက်အမျိုးအစားသည်မူတည်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောပိတ်ပစ်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောထုပ် & တံဆိပ်ခတ်စက်များ
ယနေ့တွင်စင်ပေါ်ရှိထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးနှင့် capping နှင့် sealing machine များတွင်အလုပ်များစွာရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပိတ်ပစ်အမျိုးအစားများသည်ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်သည်။ ...
စီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်များကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်ရန်အလိုအလျှောက်စက်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်းအရည်အဆာအားလုံးနီးပါးတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားစံ features တွေကျယ်ပြန့်အပေါ်ထည့်သွင်းထားပါသည်
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အလိုအလျောက်ဖြည့်တဲ့စက်တစ်ခုအတွက်သန့်ရှင်းတဲ့နေရာတစ်ခု (CIP) ကစက်ထဲရှိထုတ်ကုန်လမ်းကြောင်းကိုဖြုတ်တပ်ခြင်းမရှိဘဲသန့်ရှင်းစေပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်လုပ်အားနည်းသောအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်သဖြင့်ထုပ်ပိုးသူများစွာအတွက်အကျိုးရှိသည်။
လူကြိုက်အများဆုံးပုလင်း Filler ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
သငျသညျ browsed ကြလျှင် NPACK သင်၏ပုလင်းများကိုဖြည့်ရန်အတွက်အဖြေတစ်ခုရှာဖွေသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်၊ မတူကွဲပြားသောအအေးစက်အမျိုးမျိုးရှိသည်ကိုသင်သတိပြုမိပြီးဖြစ်သည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်အရည်တစ်မျိုးထက်ပိုသော ...
တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းဆိုလျှင်ထုပ်ပိုးခြင်းစီမံကိန်းတိုင်းနီးပါးသည်ထူးခြားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောထုတ်ကုန်၊ ထူးခြားသောပုလင်းပုံစံသို့မဟုတ်အရွယ်အစားမှလည်းကောင်း၊ ထုပ်ပိုးသည့်ကြမ်းခင်းပေါ်ရှိအဆန်းမဟုတ်သောလေထုမှပင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဒီအဆန်းမဟုတ်သောလေထု ...
အစားအစာထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ပိုးခြင်းသည်စက်ယန္တရားထုတ်လုပ်သူအတွက်စိန်ခေါ်ချက်များစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များစွာရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ဤစိန်ခေါ်မှုများသည်ထူးခြားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုစီနှင့်တစ်ခုချင်းစီတွင်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ သို့သော်ထပ်တလဲလဲပြissueနာတစ်ခု ...
တိုးမြှင့်အလိုအလျောက် - စက်ဖြည့်
စက်ယန္တရားထုတ်လုပ်သူများအနေနှင့် NPACK ထုပ်ပိုးခြင်းအထူးကုများသည်အလိုအလျောက်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိဘဲအရည်ဖြည့်တင်းသူများနှင့်စကားလက်ဆုံပြောဆိုလေ့မရှိချေ။ မည်သည့်ထုတ်ကုန်အတွက်မဆိုလိုအပ်သောအလိုအလျောက်အဆင့်သည် Packager မည်မျှဘူးများဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုခြင်းအပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။
တစ် ဦး ကဆောင်းရာသီ Wonderland ခုနှစ်တွင်ထုပ်ပိုး
နှစ်စဉ်ရာသီဥတုအေး။ အပူချိန်ကျလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ထုပ်ပိုးသူများကိုထုပ်ပိုးခြင်းစက်ကိရိယာများ၊ အထူးသဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုဖြည့်တင်းရန်အတွက်အချို့သောချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ရန်သတိပေးလိုသည်။ လူတိုင်းအတွက်အထူးသဖြင့်နေထိုင်ရန်လုံလောက်သောကံကောင်းသူများအတွက်မမှန်ပါ။
လူကြိုက်များသောထုပ်ပိုးစက် - ပစ္စတင် Fillers
အလွန်အကျွံဖြည့်စွက်သည့်စက်သည်ထုတ်ကုန်အတော်များများအတွက်လူကြိုက်များသော်လည်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၏ viscosity မြင့်တက်လာသောအခါနှင့်အရည်များသည်လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းမသွားသောအခါ၎င်းတို့သည်ထိရောက်သောစက်များမဟုတ်ပါ။ ပိုထူသောထုတ်ကုန်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးထုပ်ပိုးမှုတစ်ခု ...
12... 10 နောက်တစ်ခု